हलो अड्काएर गोरु पड्काउने प्रवृत्ति कहिलेसम्म ? | Mechikali Daily
हलो अड्काएर गोरु पड्काउने प्रवृत्ति कहिलेसम्म ?
Posted By: Mechi Kalion: १ फाल्गुन २०७३, आईतवार ०५:१२
वर्तमान राजनीति संविधान संशोधन र निर्वाचनमा रुमल्लिएको छ । यसअघिको सरकारले स्थानीय चुनावको मिति तोके पनि त्यो सम्भव हुन सकेन । महाभूकम्पद्वारा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यथोचित गति नलिएको, चुनाव गराउन नसकेको मधेसवादी दलहरुको आन्दोलनलाई अवतरण गराउन नसकेको, भारतस“ग सम्बन्ध सुधार गर्न नसकेको, चीनतिर ज्या“दा झुकाव राख्न थालेको जस्ता आरोप लगाउ“दै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार ढलेको थियो । यसपछि मधेसवादी दलहरुसँग मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने, मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकालाई शहीद घोषणा, मृतकका परिवारजन र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिने तथा मुद्दा फिर्ता लिने गरी तीनबु“दे सहमति गरी तथा नेपाली का“ग्रेसका सभापतिस“ग आलोपालो गरी सत्ता चलाउने सहमतिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार प्रमुख बने ।
आपूm प्रधानमन्त्री भएपछि उनले पहिलेजस्तो भावुक भई नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिने दावी मात्र गरेनन् सत्ता केन्द्रित राजनीतिको यो मुकामसम्म आइपुग्दा धेरै हण्डर ठक्कर खाइसकेको र थुप्रै अनुभव सँगालिसकेकाले अब आपूm हरेक कार्यमा सफल बन्ने उद्घोष पनि गरेका थिए । सरकार बनेपछि उनले मधेसवादी दलका दुई ओटा मागको सम्बोधन गरिदिए तर सीमाङ्कनको विषयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरी प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ । तर, राष्ट्रसभाको प्रतिनिधित्व, भाषा आयोग तथा नागरिकताका विषयमा सहमति जुटे पनि सीमाङ्कनको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संशोधन विधेयकले मूर्त रुप प्राप्त गर्न सकेको छैन । सीमाङ्कनको विषयमा गम्भीर राष्ट्रघात हुने भन्दै प्रतिपक्षी दलले मानेका छैनन् ।
उसले पहिले नै २ नं. प्रदेशकोसीमाङ्कन गर्दा नै एकपटक गम्भीर गल्ती गरिसकेकाले पुनः अन्यत्र त्यस्तो गल्ती गर्नु नहुने तर्क गरेको छ । संशोधन विधेयकलाई यथास्थितिमा पारित गरिए आपूmहरुले यसलाई नमान्ने बताइसकेका छन् । यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याई पारित गराए पनि उनीहरुले यसबाट चित्त नबुझाई आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए । यसरी नै दोस्रो पटक संशोधन गरिए पनि आन्दोलन स्थगित नभई पुनः जारी नै रहिरहने आशङ्का जीवित नै रहेको प्रतिपक्षी दलहरुसहित अधिकांश नागरिकको पनि छ । जबसम्म मधेसवादी दलहरुले पूर्णतः सहमति जाहेर गर्दैनन् तबसम्म संशोधनको प्रक्रिया बढ्नु र पारित हुनुको कुनै अर्थ देखिन्न । आन्दोलनरत पक्ष पनि सन्तुष्ट नरहेको र प्रतिपक्षी दलहरु पनि आश्वस्त हुन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यथास्थितिमै संशोधन गर्दा समस्या जहा“को तही“ रहने देखिन्छ ।
संशोधनको तार्किक पुष्टि हुृनुपर्ने अडान राखिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संविधान संशोधन विधेयकलाई छलफलको विषय बन्न दिने मनस्थितिमा देखिन्न । ऊ निर्वाचनलाई निर्विकल्प सम्झदै यसैका निम्ति चौतर्फी दवाव सृजना गर्दै छ । मधेसवादी दलहरुलाई समेत आगामी निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत हासिल गरी आपूmले चाहे जस्तै संविधान संशोधन गर्न खुला रुपमै अपील गर्दै छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि गम्भीर आपत्ति जनाउ“दै स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा पनि जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाउनु पर्ने तर्क अघि सारेको छ । अहिले सरकार एमालेको सबैभन्दा पहिले निर्वाचन अनि प्राप्त मतका आधारमा प्रदेश सभाद्वारा संविधान सम्मत ढंगले सीमाङ्कनका निम्ति संशोधन भन्ने एकोहोरो रटान र मधेसवादी दलहरुको पहिले पुनरावलोकन सहितको संविधान संशोधन अनि मात्र निर्वाचन भन्ने उस्तै किसिमको रटानका बीचबाट जेनतेन गुज्रदै छ ।
सरकारले निर्वाचन आयोगलाई वैशाख मसान्तदेखि जेठ आधाआधीसम्मको समयावधि दिई खास मिति नतोकिकन नै निर्वाचनका निम्ति आवश्यक कार्य आरम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादबले छिटो सहमति गरी मिति तोकी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको विद्युतीय मतदान मेसिन उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छन् । यस स्थितिमा सरकारले उक्त मेसिन उपलब्ध गराउला नगराउ“ला यसै भन्न नसकिए पनि दलहरुले भने यस पटकको चुनावमा त्यसतो मेसिन प्रयोग नगर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
यस प्रकार देशलाई चुनाव अत्यन्त आवश्यक रहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकार संशोधन पनि गराउन नसक्ने र चुनाव पनि गर्न नसक्ने स्थितिमा देखिनुले देशमा अझै राजनीतिक सङ्कट गहिरिने संकेत देखा परिरहेको छ ।
मधेस केन्द्रित दलहरुको सहमतिमै न्यूनतम सहमति बनाएर एकपटकलाई संविधान संशोधन गरेर भए पनि मुलुकलाई चुनावतिर लैजानु आवश्यक देखिएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै कडा प्रतिवाद भइरहेको अवस्थामा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने परिीसथति देखिन्न । यदि भइहाले पनि संविधानमा लेखिए बमोजिम नै प्रदेश सभाले गर्ने निर्णय व्यवस्थापिका संसद्ले गरेको हुँदा सर्वोच्च अदालतले निर्णय वदर गर्न सक्ने हु“दा संसदमा छलफल गर्न र पारित गर्नका निम्ति सरकारलाई प्रयास गर्न अवसर दिनै पर्ने धेरै बुद्धिजीवीहरुको राय छ । सरकारले संशोधन विधेयक ल्याउन र त्यसलाई छलफल गराउन दिनु उपयुक्त विधि र प्रक्रिया भएकाले एमालेले खोचे थापेर हलो अड्काउने र गोरु पड्काउने काम गर्नु नहुने केहीको राय छ ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको अवस्थामा पनि देशको अखण्डतामा असरै पर्ने देखिन्न । त्यस्तो असर पर्ने मान्नेनै हो भने विमानस्थलमा एयर मार्सल राख्न दिने गरी गरिएको निर्णय, महावाणिज्य दूतावास राख्न दिने निर्णय, भारतीय भूपू आर्मीलाई पेन्सन दिनका लागि राखिएका क्याम्पहरुमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति र उनीहरुको दादागिरी, नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा भइरहेको माइक्रोम्यानेज आदि जस्ता विषयहरुमा समेत बोल्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न पहल गर्नुु जरुरी छ । राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकताका र स्वाभिमानका सवालमा मधेसवादी दलहरुभन्दा देशका ठूला दलहरु नै अत्यन्त कमजोर देखिएका छन् । विगतका इतिहासलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने गण्डक, कोशी, महाकाली जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता तराईको नेतृत्वले गरेको होइन । यसमा उनीहरु प्रायः किनाराका साक्षी मात्रै बन्ने गरेका छन् । हो, सुस्ता, कालापानी, मेची, गढ्ढार्चाकी मिच्दा उनीहरु बोलेका छैनन् तर सुनसरी लगायतका क्षेत्रमा भारतीहरुका अतिक्रमणको सशक्त प्रतिकार गरेका छन् ।
सा“च्चै भन्दा मधेसवादी दलहरु दुवैतिर चेपुवामा परेका छन् । भारतीय नेता र नेतृत्वले पनि उनीहरुलाई प्रयोग मात्र गर्दछ । यस तथ्यको प्रमाण गत वर्ष भारतले मधेसवादी दलहरुलाई आवरणमा राखेर नाकाबन्दी ग¥यो । पछि नेपाल, भारत र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल बनेपछि मधेसवादी दलहरुलाई नसोधीकन नै भारतले एकतर्फी रुपमा नाकाबन्दी खोलिदिएर आप्mनो र मधेसवादी दलहरुको चरित्र उदाङ्गो पा¥यो । यसबाट मधेसवादी दलहरुलाई भारतले प्रयोग मात्र गर्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ । जनस्तरमा हेर्दा पनि यस्तै स्थिति छ । भारततिर भएकाहरुले नेपालतिरका कुलकुटुम्बप्रति त्यति सम्मानजनक व्यवहवार गर्दैनन् । भारतीय अधिकारीहरुले गर्ने ज्यादती दर्दनाक हुने गर्दछ । यसबाट नेपालका तराईवासी नेपालीहरु भारतीय पक्षबाट प्रताडित बन्ने गरेका छन् भन्ने सहजै बुभ्mन सकिन्छ ।
नेपालका ठूला दलहरुले तराईवासी नेतागणलाई गर्ने व्यवहार सम्मानजनक नहुने गरेको गुनासो वर्षौंदेखि सुनिदै आएको छ । खासगरी खसबहुलको नेतृत्व रहेको पार्टीमा उनीहरुप्रति गरिने व्यवहार अझै विभेदयुक्त रहेको देखिएको छ । उनीहरुले ठूला पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छैनन् । लोकतन्त्र आएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त बन्ने अवसर पाए पनि देशको कार्यकारी बन्ने अवसर पाएका छैनन् । साथै ठूला पार्टीका अध्यक्ष तथा सभापति बन्ने अवसर पनि पाएका छैनन् ।
हुन त तराईबासी नेतागणले पनि देशको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति र सामथ्र्य हासिल गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण देशको नेता बन्ने लक्षण र चरित्र विकसित गर्न सकेमा नै मुलुकको बाग्डोर सम्हाल्ने अवसर प्राप्त हुन सक्तछ । यस दिशामा उपेन्द्र यादव अघिबढिरहे पनि उनले क्षेत्री, बाहुन, दलित र दशनामीहरुकोृ मन जित्ने प्रयास गरेको देखिन्न । यस दिशामा उनी क्रियाशील रहे भोलि तराईबासी अनुहारले पनि देशको प्रतिविधित्व गर्ने सुअवसर पाउने निश्चित छ । तर, आपूmमा त्यो गुुण र लक्षण आर्जन नगरी कार्यकारी प्रमुख बन्ने आकांक्षा राख्नु त्यति तार्किक देखिन्न । हो तराईका नागरिक देख्ने बित्तिकै भारतीको आँखाले हेर्ने कथित सोचमा भने सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । उनीहरुमाथि मात्र सदा शङ्का गरिरहनुभन्दा आपूmमा पनि हरेक नागरिकले स्वाभिमानको भावना विकसित गर्नु आवश्यक छ । जबसम्म हामीले यस्तो भावना विकसित गर्न सक्दैनौं तबसम्म अरुमाथि मात्र एकोहोरो शंका गर्नु न्यायोचित हु“दैन । तसर्थ हामीले पनि आफ्ना चरित्रको सुधार परिष्कार गर्दै स्नेह, सद्भाव सम्मान र मित्रतापूर्ण कार्यहरु गर्दै गएमा नै सारा नकारात्मक भावहरु हटी राष्ट्रिय एकता मजबूद बन्न सक्तछ । जरोमा हलो अड्काएर गोरु पड्काउने नगरौं । यसो गरेमा मात्र देश भावनात्मक रुपले जोडिन सक्तछ । समृद्धि र विकासको मार्गमा लम्कन सक्तछ । यसर्थ हामीले उनीहरुका उचित मागहरुमा ध्यान दिई सहमति र सहकार्यका निश्चित परिधिहरु फेला पारेर राष्ट्रिय हित प्रबद्र्धन गर्ने दिशामा अग्रसर हुनु नै उचित हुने देखिन्छ ।